RSP ပညာရေးက Aspiring ပန်းချီဆရာများကိုကူညီရာတွင်ရေရှည်အောင်မြင်မှုအတွက်လမ်းခင်းပေးသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » RSP ပညာရေးက Aspiring ပန်းချီဆရာများကိုကူညီရာတွင်ရေရှည်အောင်မြင်မှုအတွက်လမ်းခင်းပေးသည်
စတူဒီယို blockbusters များဖြင့်အလုပ်လုပ်ပြီးနောက်မကြာသေးမီကဘွဲ့ရများဖြစ်သော Abby Nath နှင့် Rebecca Wells တို့သည်ဝါရင့်အခန်းကဏ္ in များတွင် RSP သို့ပြန်လာခဲ့ကြသည်။
သြစတြေးလျတောင်ပိုင်း၊ Adelaide - Rising Sun Pictures ပညာရေးသည်အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုဆိုင်ရာအနုပညာရှင်များ၏ထူးခြားသောဂုဏ်သတင်းကိုရရှိခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်စတူဒီယိုပတ် ၀ န်းကျင်တွင်လေ့ကျင့်ရန်ထူးခြားသည့်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ တောင်သြစတြေးလျတောင်ပိုင်းတက္ကသိုလ် (UniSA) နှင့်လက်တွဲလုပ်ကိုင်ပြီး၎င်း၏တိကျခိုင်မာသည့်ဘွဲ့လွန်လက်မှတ်အစီအစဉ်များကိုပြီးစီးခဲ့သောလူငယ်အနုပညာရှင်များစွာကို RSP ကိုယ်တိုင်ကငှားရမ်းထားပြီးထိုတွင်သူတို့လုပ်ကိုင်ရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။ Ford v Ferrari ဖြစ်သည်, Spider-Man: ဝေးမူလစာမျက်နှာ မှစ., ဗိုလ်ကြီးအံ့ဩခြင်း နှင့်အခြား hit ရုပ်ရှင်. အခြားသူများကမူသြစတြေးလျနှင့်အခြားနိုင်ငံများရှိစတူဒီယိုများတွင်အလုပ်ရကြသည်။
RSP သည်ကျောင်းသားများကိုအမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုလေ့ကျင့်ပေးမှုကိုတံခါးတွင်ခြေတစ်ချောင်းချထားရန်နှင့်သူတို့၏ပထမဆုံး VFX အခန်းကဏ္inတွင်အောင်မြင်ရန်ပြင်ဆင်ပေးသည်။ ကျွမ်းကျင်သောဝန်းကျင်တွင်သူတို့၏ကျွမ်းကျင်မှုများကိုချီးမြှောက်ခြင်းအားဖြင့်၊ အတွေ့အကြုံရှိပြီးအတွေ့အကြုံရှိသော၊ အလုပ်လုပ်နေသောပညာရှင်များ၏ကျောထောက်နောက်ခံပြုမှုအောက်တွင်အများစုသည်အစစ်အမှန်ကမ္ဘာအလုပ်အကိုင်သို့ကူးပြောင်းခြင်းကိုချောမွေ့စေသည်။ အလားတူစွာ၊ ကျောင်း၏မတူကွဲပြားသောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုဆိုင်ရာလမ်းညွှန်မှုအရင်းအမြစ်များမှအကျိုးအမြတ်ရရှိပြီးနောက်ဘွဲ့ရများသည်၎င်းတို့အနေဖြင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသောပညာရှင်များ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်များမည်သို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရမည်နှင့်အလုပ်ရှင်များကိုမည်သို့စျေးကွက်တင်ရမည်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ကြသည်။
RSP အနုပညာရှင်များ Rebecca Wells နှင့် Abby Nath
စတူဒီယို၏ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးမန်နေဂျာ Anna Hodge က“ လက်တွေ့ကျသော၊ ကျွမ်းကျင်သောစွမ်းရည်များကိုသင်ကြားခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အစီအစဉ်အတွက်အဓိကကျသည်။ "ကျနော်တို့ကရေရှည်အောင်မြင်မှုနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတိုးမြှင့်ဖို့အရေးကြီးသောအခြေခံအဆောက်အ ဦ များပေး။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘွဲ့ရများသည်စက်မှုလုပ်ငန်း၌ပထမဆုံးအလုပ်စတင်ခဲ့သည့်အခါကျွန်ုပ်တို့အလွန် ၀ မ်းသာပါသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ဝင်စားမှုမှာမပြီးဆုံးသေးပါ။ သူတို့ကိုအောင်မြင်စေချင်တယ်၊ ရာထူးတက်ပြီးသူတို့ရဲ့အလုပ်အကိုင်ရည်မှန်းချက်တွေကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်စေချင်တယ်။ ”
Abby Nath နှင့် Rebecca Wells တို့သည် RSP ၏အောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းများဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးငယ်နှစ် ဦး စလုံးသည်စတူဒီယိုတွင်ဘွဲ့လွန်လက်မှတ်များရရှိခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်အငယ်တန်းအနုပညာရှင်များအဖြစ်ငှားရမ်းခံခဲ့ရသည်။ အခြားစတူဒီယိုများ၌ထပ်မံအတွေ့အကြုံများရရှိပြီးနောက်၊ သူတို့နှစ် ဦး စလုံးသည် RSP သို့ပြန်လာပြီး ပို၍ အဆင့်မြင့်သောအခန်းကဏ္ projects များ၌စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောစီမံကိန်းအသစ်များတွင်ပါ ၀ င်နေကြသည်။
မူလကစင်ကာပူနိုင်ငံမှ Nath သည် Rookies ပညာသင်ဆုမှတစ်ဆင့်အစီအစဉ်တွင်ပါ ၀ င်ခြင်းအားဖြင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် Dynamic Effects and Lighting ၌သူမ၏ဘွဲ့လွန်လက်မှတ်ကိုရရှိခဲ့သည်။ သူမသည်ချက်ချင်း RSP မှာအလုပ်လုပ်စတင်ခဲ့သည်။ သူမသည် AdOlide ရှိနှစ် ဦး စလုံး KOJO နှင့် Mill Film တို့တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးမေလတွင် RSP သို့မပြန်မီ Look Development Artist အဖြစ်ပြောင်းခဲ့သည်။ လမ်းတစ်လျှောက်မှာသူမကရုပ်ရှင်တွေမှာပါ ၀ င်ခဲ့တယ် အဆိုပါ Predator, Alita: တိုက်ပွဲအိန်ဂျယ်, ဗိုလ်ကြီးအံ့ဩခြင်း, X-Men: Dark Phoenix မြို့ နှင့် Ford v Ferrari ဖြစ်သည်။
အပေါ် RSP ရဲ့အသင်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် Ford v Ferrari ဖြစ်သည်, Nath သည် ၁၉၆၆ တွင်ပြသခဲ့သည့်အတိုင်း Daytona International Speedway ၏ပုံတူကိုတည်ဆောက်ရန်ကူညီခဲ့သည်၊ ၎င်းသည်ရုပ်ရှင်ထဲတွင် ၈ မိနစ်ဆက်တိုက်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ သူမကသူမပြန်ပြောပြသည်မှာ - ကျွန်ုပ်တို့သည်ရပ်ကွက်၊ လူအုပ်ကြီးနှင့်လမ်းကြောင်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ “ လူတွေ ၀ တ်ဆင်သင့်တာကိုရှာဖွေရတာအရမ်းပျော်ခဲ့တယ်။ Plus အား, ကအံ့သြဖွယ်သရုပ်ဆောင်များကိုနှင့်အတူထိုကဲ့သို့သောအလွန်ကြီးစွာသောဇာတ်လမ်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါအဲ့တာကိုကြိုက်ခဲ့ဖူးတယ်!"
Nath သည်ပညာရေးပြီးဆုံးပြီးနောက်မကြာမီတွင်နာမည်ကြီးစတူဒီယိုအင်္ဂါရပ်များ၌အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝသောအလုပ်လုပ်ကိုင်နေသည်ကိုတွေ့ရသည့်အတွက်အံ့အားသင့်ခဲ့ရသည်၊ သို့သော် RSP ၌သူမ၏လေ့ကျင့်မှုကြောင့်သူမသည်စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုမရှိခဲ့ဟုဆိုသည် “ စတူဒီယိုအစစ်အမှန်လိုမျိုးတပ်ဆင်ထားတဲ့ပရိုဂရမ်တစ်ခုကိုဖြတ်သန်းခြင်းကကျွန်တော့်ကိုအများကြီးအထောက်အကူပြုတယ်။ "RSP မှာစက်မှုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့တယ်၊ ငါလည်းအလားတူအခန်းကဏ္imagineမှာရှိနေတယ်။ "
လက်ရှိတွင် Paint and Roto အနုပညာရှင် Wells သည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် Compositing and Tracking အစီအစဉ်တွင်ဘွဲ့လွန်လက်မှတ်ကိုပြီးစီးခဲ့သည်။ RSP အပြင် Luma Pictures, KOJO နှင့် Resin တို့တွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ ပတေရုသယုန်, သင်္ချိုင်း Raider, တိရိစ္ဆာန်ကမ္ဘာကြီး, Spider-Man - အိမ်ကနေဝေး၊ Captain Marvel နှင့် Jojo ယုန်။ “ စတူဒီယိုအမျိုးမျိုးမှာပြောင်းရွှေ့လုပ်ကိုင်တာဟာအဖိုးတန်ကြောင်းကျွန်တော်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ "သေးငယ်တဲ့စတူဒီယိုတွေမှာမင်းမှာသင်၏ကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည်ကိုယေဘူယျအားဖြင့်သင်နှင့်ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုတွင်လုပ်ရန်အခွင့်အရေးမရနိုင်သောအရာများကိုပြုလုပ်ရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။ "
Wells သည်အလွန်မြင့်မားသောယှဉ်ပြိုင်မှုရှိသောစက်မှုလုပ်ငန်းတွင်တည်မြဲနေရန်ယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိစေရန် RSP တွင်သူမ၏အတွေ့အကြုံကိုချီးကျူးခဲ့သည်။ သူမက“ ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်ဟာရှက်တတ်ပြီးထိန်းထားတတ်တယ်။ ဒါပေမယ့်ဘာတွေလုပ်တယ်ဆိုတာကိုငါသင်ယူခဲ့တယ်၊ နေရာအသစ်တွေသွားပြီးလူတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့တွန်းအားပေးခဲ့တယ်” ဟုသူမကဆိုသည်။ “ ကျွန်မရဲ့ပထမဆုံးနှစ်တွေကနှေးကွေးပြီးအသေးစားစီမံကိန်းတွေပါ ၀ င်မယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်စီမံကိန်းကြီးတွေမှာချက်ချင်းလုပ်ဆောင်ရတာကိုကျွန်တော်အံ့သြမိတယ်။ အံ့ fan စရာကောင်းတဲ့ပန်ကာတစ်ယောက်အနေနဲ့အလုပ်လုပ်ရတာစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတယ် ပင့်ကူလူသား နှင့် အံ့ဖွယ်ရာရုပ်ရှင်ကားများ။ ”
“ မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူပြဇာတ်ရုံကိုသွားပြီးငါဖန်သားပြင်ပေါ်မှာကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့ပုံကိုကြည့်ရတာဝမ်းသာပါတယ်။ 'ငါသူတို့ကိုလုပ်ခိုင်းလိုက်မယ်' ငါလုပ်ခဲ့တာ '
အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုအနုပညာရှင်တစ် ဦး ၏ဘဝသည်ကြိုးစားအားထုတ်မှုများစွာလိုအပ်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုသော်လည်းနှစ် ဦး စလုံးအခွင့်အလမ်းများစွာရှိသည်ဟုအခိုင်အမာဆိုကြသည်။ “ စက်မှုလုပ်ငန်းထဲ ၀ င်ဖို့ဘယ်လောက်ခက်ခဲတယ်ဆိုတာကိုသိရင်မင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံဖို့လိုတယ်” ဟုဝဲလ်ကပြောသည်။ ဆက်လက်လေ့လာသင်ယူပြီးသင်ကိုယ်တိုင်ဆက်လက်တွန်းအားပေးပါ။ သင်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။
Nath ကထပ်မံဖြည့်စွက်ရန်လိုသည်။ "ဒါဟာခက်ခဲနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ပြပွဲအသစ်များကိုအမြဲလာမယ့်နှင့်အမြင်အာရုံဆိုးကျိုးများထုတ်လုပ်ရန်လူလိုအပ်နေပါသည်။ မင်းဘာလို့မဖြစ်သင့်တာလဲ”
ပညာရေး ကျောင်းများ လေ့ကျင့်ရေး VFX Visual Effects 2020-06-02
ယခင်: Matrix Biren Bharucha ကို VP၊ Enterprise Sales အဖြစ်ငှားရမ်းသည်
နောက်တစ်ခု: American Horror Story တွင် Lectrosonics အတွက်အသံစိန်ခေါ်မှုသည်အလွန်ကြောက်စရာကောင်းသည်